Ho an’ny kaominina Alasora, distrikan’Antananarivo Avaradrano manokana dia noferana ho 5 minitra monja izany ka ireo mpivady tonga nisoratra, ny tompon’andraikitry ny kaominina ary ireo vavolombelona ihany no afaka nanatrika izany. Tsy nisy ihany koa ny fifandraisan-tanana sy ny fifanorohana toy ny hita tany amina fiangonana Kristianina iray izay nanamasina mariazy. Izany no natao moa dia ho fisorohana ny mety ho fiparitahan’ny valan’aretina coronavirus. Mikasika ny fanararaotana nataon’ny sasany tamin’ny Sabotsy teo tamin’ny fampiakarana vidin’entana sy ny fangoronana entana dia kamiao iray lehibe no fantatra fa nandroaka ny entana rehetra teny an-tsena tao Alasora ny Sabotsy teo. Avy hatrany dia nandray ny andraikiny ny Ben’ny tanana sy ny ekipany niaraka tamin’ny mpitandro ny filaminana ka ankoatra ny fanaraha-maso ny vidin’entana dia nanaovana fitsirihana ihany koa ireo mpanararaotra mitady hanan-karena tampoka.